धानमा रोग लाग्यो, यसरी रोग किन लाग्छ ?  Clickmandu
धानमा रोग लाग्यो, यसरी रोग किन लाग्छ ?
क्लिकमान्डु २०७५ असार २८ गते १६:२६ मा प्रकाशित
ललितपुर । नेपालको प्रमुख बाली धानमा विभिन्न किसिमका रोगका संक्रमणले किसान हैरान छन् । धानबालीमा मुख्य गरेर मरुवा, फेद कुहिने रोग, खैरोथोप्ला र पातेफेद डढुवाको प्रभाव देखिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क अन्तर्गतको बाली रोग विज्ञान महाशाखाले जनाएको छ ।
बर्षेनी धानबालीमा पहाडी क्षेत्रमा मरुवा र तराई क्षेत्रमा डढुवा दोहोरिरहेको मानन्धरले बताए । यी रोगका कारण वार्षिक झण्डै २० प्रतिशत उत्पादन नोक्सानी हुँदै आएको छ । उनले भने– “यो रोगले प्रकोपको रुप लिँदा ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म पनि बालीमा नोक्सान गर्न सक्छ ।” किसानले सकेसम्म रोग नियन्त्रक जातको बिउ रोप्नुपर्नेमा बैज्ञानिक मानन्धरले जोड दिए । रोगले प्रकोपकै रुप लिएपछि मात्रै किसान प्रयोगशाला पुग्छन् ।
रोग लाग्ने जातको बीउ, सशक्त जीवाणुको उपस्थिति र रोग अनुकूलको वातावरणले मात्र बालीमा असर पार्ने नार्कका अध्ययनमा पाइएको छ । रासस